सुजिता भण्डारीको हत्या कि आत्महत्या ? अपहरणबारे अन्योल - Akhabarpatra
बिहान ५ बजे खेतमा जान उठेका बेला हेर्दा छोरी सुतिरहेकी थिइन्,’ सुजिताका बुबा यज्ञप्रसाद भन्छन्, ‘बहिनी ६ बजे उठ्दा चाहिं उनी थिइनन् ।’ यही बयानको आधारमा प्रहरीले सुजिता साढे ५ देखि सवा ६ बजेको अवधिमा घरबाट निस्किएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।
‘कता लैजाँदैछन् ?’ दिदीले एसएमएस गरिन् । कविताको एनटीसी नम्बरमा १२ः४४ र १२ः४२ मा एसएमएसको जवाफ आएको छ, ‘पूर्वतिर ।’ त्यसपछि सम्पर्क टुट्यो । उनले बुबाआमालाई खबर गरिन्, प्रहरीलाई पनि सुजिता अपहरणमा परेको भनियो ।
प्राविधिक पाटोको विश्लेषण गरिरहेको प्रहरीले सुजिताले दिदीलाई दिएको जानकारीको एउटा विषय अमिल्दो पायो । उनले एसएमएसमा ‘पूर्वतिर’ लगेको भनेकी थिइन् । तर बीटीएस टावरको विश्लेषणले उनको मोबाइलमा चितवनकै कुमरोजको टावर टिपिरहेको भेटिएको थियो
कवितालाई फोनमा दुई जना महिला र एक जना पुरुषले ट्याक्सीमा हालेर अपहरण गरेको भनिएको थियो । तर हराएको क्षेत्र आसपासमा बस्ने व्यक्तिहरुले कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि नदेखेको प्रहरीलाई बयान दिए । त्यसक्षेत्रमा क्लोज सर्किट (सीसी) क्यामरा पनि थिएन ।
यदि आत्महत्या नै गरेको मान्ने हो भने कारण के हुनसक्छ ?
अनुसन्धान अधिकृतहरु यसपछाडि प्रेम सम्बन्धको विषय हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । तर प्रहरीले यी सबै आशंकालाई प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्नेछ र आत्महत्या देखिए दुरुत्साहनको मुद्दा चल्न सक्नेछ ।